Iyo yemahara XMPP mutengi yaxim inopemberera yayo yegumi yegumi | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yemahara XMPP mutengi yaxim inopemberera yayo yegumi yegumi
Musi waAugust 23, ivo vanogadzira yaxim, yemahara XMPP mutengi yeiyo Android chikuva, vakapemberera makore gumi epurojekiti. Zvakanaka, makore gumi apfuura, musi waAugust 23, 2009, Kubatana kwekutanga kwaYaxim kwakasimbiswa, zvinoreva kuti nhasi uno mutengi weXMPP zviri pamutemo hafu zera reprotocol raanomhanyisa. Kubva ipapo, pange paine shanduko zhinji kune ese ari maviri XMPP uye neiyo Android system.
Kune avo vasingazive nezve yaxim, munofanirwa kuziva izvo ichi chakavhurika sosi Jabber / XMPP mutengi (GPLv2). Yaxim chishandiso chinovavarira kuchengetedzeka, yakadzika pamusoro uye nekuchengetedza yako server kubatana yakavhurika.
1 About yaxim
2 Makore gumi eYaxim
2.1 Shanduko dzakakosha
2.2 Matambudziko chaiwo
Mukati yezvakakosha zveaxim tinowana zvinotevera:
Kubatana neiyo imwechete XMPP server (kana GTalk, kana Facebook Chat, kana ...)
Iwe unobvunzwa nezve wega-wakasainira SSL zvitupa
Inobvumira otomatiki kubatana mushure mekubatidza foni yako
Transparent kubatanidzwazve mu 3G / WiFi network shanduko (XEP-0198)
Taura neshamwari dzako (meseji dzakachengetwa)
Kuendesa kwekusimbisa (XEP-0184).
Yaxim iyo yakanyorwa muJava uye kodhi yekodhi inochengetwa muGit. Yaxim inogona kuverengerwa nevashandisi vanofarira, saka ivo vanongoda iyo Android SDK uye svosve kuumbiridza.
Kuti ubatanidze yaxim, nhanho dzinotevera dzinofanira kuteverwa:
git clone git@github.com:pfleidi/yaxim.git
android update project -p . -s
android update project -p ActionBarSherlock/actionbarsherlock
android update project -p MemorizingTrustManager –subprojects
ant proguard debug
ant proguard release
Makore gumi eYaxim
Muna 2009, iyo Android chikuva yakanga ichiri nyowani uye yakashaya yemahara yekukurumidza mameseji mutengi. Pakanga paine runyerekupe uye zviziviso, asi hapana akange atumira kodhi yekushanda parizvino. Yokutanga kongiri track kwaive kuratidzwa kwevadzidzi veGerman Sven naChris vachipa yavo semester chirongwa YAXIM (Asi Imwe XMPP Instant Messenger)
Vakagamuchira tsamba dzinoverengeka dzakanaka, yakagadzira chirongwa paGitHub uye ndokuenderera nekunyora kodhi. Pakupera kwegore, imwe mharidzo pfupi yakaratidzwa kuYaxim 26C3. Yakavimbika meseji yekuendesa yaive dambudziko hombe na yaxim panguva iyoyo, asi zvinhu zvakave nani.
Makumi gumi apfuura nhasi, yekutanga yaxim chisungo chakagadzirwa, saka izvozvi zviri pamutemo hafu seyakare seXMPP. Kubva ipapo, zvakawanda zvaitika zvese muXMPP ecosystem uye padivi Android.
Uye 2010, YAXIM yakatumidzwazve kuti yaxim kuti itaridzike sezita uye zvishoma senge inopfupisa. Muna 2013, chirongwa cheBruno chakagadzirwa semunin'ina weaxim, mutengi weXMPP wevana uye nemunhu wese anoda mhuka. Izvozvi ine vangangoita 2.000 vashandisi vanoshanda.
Zvakare mu2013, iyo ymp.im XMPP server yakaburitswa, kunyanya kuita kuti kushandiswa kweaxim naBruno uye zvakare kuve yakagadzikana uye yakavimbika sevha yakakodzera kune mbozha vatengi. Chekupedzisira, muna2016, yaxim yakagamuchira logo yazvino, mufananidzo weyak.
Kubva pazuva rekutanga, yaxim yaive chirongwa cheamateur, isina rutsigiro rwezvokutengeserana uye isina vagadziri venguva dzose.
Kwemakore, kodhi yayo yakakura zvishoma nezvishoma uye muna 2015 yainyanya kusabereka. Kunyangwe iyo yaxim iine akawanda ekuisa paGoogle Play pane Kukurukurirana, iyo yekupedzisira, sekutaura kwevamwe, ndiyo inonyanya mutengi paApple uye inozivikanwa kwazvo nevashandisi veXMPP.
Nekudaro, kweanenge makore matatu apfuura pakange pasina kuderera kwenhamba yemidziyo yaxim yakaiswa pa (Google haipe nhamba kusvika muna2016).
Iyo yaxim codebase (Smack 3.x, ActionBarSherlock) yechinyakare kwazvo uye kuyedza kwakawanda kuri kuitwa parizvino kuti zviitwe yaxim tarisa zvakanaka pazvinhu zvemazuva ano zveApple kunyanya kugadzirwa kwezvinhu uyezve kutsigira zviitiko zvazvino senge zvinofambidzana mvumo dialogs uye kuchengetedza bhatiri uye zvakare iyo Matrix protocol (isingagare ichishanda).
Shanduro dzekuyedza pamwe nezvazvino zviitiko zvinopihwa kuburikidza neye beta chiteshi paGoogle Play.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo yemahara XMPP mutengi yaxim inopemberera yayo yegumi yegumi
Ultracopier multiplatform faira ikopi software
Nhasi Nyamavhuvhu 25 Linux inopemberera makore makumi maviri nemasere